မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီး ( A.B.M.A ): ကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးကွ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် စည်းကမ်းချိုးဖေါက်သည် ဟုစွပ်စွဲပြီး တရားစွဲဆိုထားသည့်အတောအတွင်… နအဖ အကြီးအကဲ များ ဆွေးနွေးပွဲတခုမှာ--
ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီး- - “ဟို မိန်းကလေးကို ထောင်ခြောက်နှစ်ချလိုက်”
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး- -- - “ ဟာ… ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင်းပြန်လွတ်လို့ရတာ ဘဲ၊ တနှစ်ခွဲလောက်ဆို လုံလောက်မယ်ထင်တယ်၊ သိပ်များလွန်းးရင် လည်း ဟိုဟိုဒီဒီက ဝေဖန်တာတွေ၊ ဖိအားဆိုတာ တွေကလာနေအုံး မယ်၊
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး- - “ အပြစ်မထင်ရှားတုန်းကတောင်မှ ငါးနှစ်တို့ ခြောက်နှစ်တို့ ချခဲ့တာဘဲကွာ။ ဟိုအော်-ဒီအော် အော်နေတဲ့ကောင် အကောင်တွေ ဘာတတ်နိုင်လို့လဲ…. အခုဟာက အပြစ် ထင်ရှား တယ်လို့ပြောလို့ရပြီဘဲ….. ဘာဂရုစိုက်စရာမှတ်လဲ။ သူ့ကိုအချုပ်ချ ထားပြီး တိုင်းပြည် ကို ငါအုပ်ချုပ်လာတာ အနှစ် ၂၀ ကျော်လာပီ…. ဂရုစိုက်မနေနဲ့ ……. ချပစ်လိုက်“။
ဗိုလ်ချူပ်…- - “ ဟာ.. စဉ်းစားပါအုန်း ဘ ဘ… ဟိုအမေရိကန် ကောင်ကလဲ ပါနေရသေး တယ်မဟုတ်လား..”
ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီး- - “ အေး…. ဒါဆိုလည်း ကြည့်ချလိုက်…..ပြီးရင် သူ့အိမ်မှာ ပြန်ပို့ထားလိုက် အရင်ကလိုဘဲ နေပလေ့စေ.. ဟိုဖိအား ဒီဖိအားတွေကို ဘာ ဂရုစိုက်စရာ မှတ်လို့…”
ဗိုလ်ချူပ်ကြီး- - “ အမေရိကန် ဆီနီတာ ဂျင်မ်ဝက် လာဖို့ သေချာ ပြီတဲ့…. မှူးကြီးနဲ့တွေ့မယ် ပြောတယ်… ဟို မိန်းကလေးနဲ့လည်း တွေ့ ချင်တယ်ဆိုဘဲ…. ”
ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီး- - “ ဟေ… ဟုတ်လား…. တွေခွင့်ပေးလိုက်….” ပါးစပ်.. မနှေးနဲ့ …… ယက်ထောကိုလဲ ခေါ်ချင်ရင်.. ပြန် ခေါ်သွားလို့ ပြောလိုက်… မိန်းကလေးကို လွတ်ပေး ဖို့ပြောရင်တော့ အချိန်ဆွဲ… အဲ..အဲ..”
ဗိုလ်ချုပ်- - “ဘ ဘ ကလည်းဗျာ… ဘန်ကီးမွန်းလာတုန်းကတောင်မှ ဟိုမိန်းကလေးနဲ့ တွေ့ခွင့်မပေးဘဲ သူ့ကျမှ တွေ့ခွင့်ပေးလိုက်တော့…အဲ….ဟို….”
( ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမှာ ချက်ဆို နားခွက်ကမီးတောက်သူပီပီ ဆက်ဒမ်ဟူ စိန်ကို ပြေးမြင်မိလိုက်သည်)
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး- - “ ဟိုတွေ ဒီတွေ လုပ်မနေနဲ့…. ဟိုကောင်တွေ က.. တို့ထက် မိုက်တယ်.. မောင်..။ ကြားဖူးတယ်မဟုတ်လား…အဲ.. ဟို.. အသက်ကိုညာဏ်စောင့်ဆိုတဲ့ စကားပုံကို လေ…”
Posted by Sanghaalliance at 4:35 PM